I-PetLet 17: I-Absolute Coorong Waterfront
(33 okushiwo abanye)
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Pet Let
Indawo entsha emakethe yamaholide futhi inikezela ngendawo yokuhlala okunzima ukuyithola enokubukwa kwendingilizi yonkana emanzini acwebile e-The Coorong kanye ne-Coorong National Park... indawo enhle yokubaleka enakho konke ukunethezeka kwekhaya.
I-Absolute Coorong iyindawo entsha emakethe yamaholide futhi inikeza indawo yokuhlala okunzima ukuyithola enokubukwa kwendingilizi yonkana emanzini acwebile e-The Coorong kanye ne-Coorong National Park... indawo enhle yokubaleka enakho konke ukunethezeka kwekhaya.
Esplanade endaweni encane futhi ebanjwe ngokuqinile yaseNoonameena (17km ukusuka eMeningie kanye ne-90mins ukusuka e-Adelaide), leli khaya elinomoya opholile linikeza imibono emihle kusukela kumpheme ongaphambili, ikhishi nezindawo zokuhlala futhi linekhishi elihlome ngokuphelele, inkosi, indlovukazi kanye amagumbi okulala ayi-bunk, amagumbi okugeza amabili nelondolo. Ku-esplanade endaweni encane futhi ebanjwe ngokuqinile yaseNoonameena (17km ukusuka eMeningie kanye ne-90mins ukusuka e-Adelaide). Sekukonke, indlu ilala abantu abadala abangu-6 nezingane ezi-2 (ilineni lombhede lihlinzekwa).
Kukho konke ukunethezeka kwekhaya, le ndawo inikezela nge-air conditioning ebuyela emuva, umshini wokuwasha izitsha, umshini wokuwasha nokomisa, kanye ne-gas BBQ.
Ngesikhathi sokuhlala kwakho uzoba nokufinyelela okugcwele kuma-kayak (ama-tandem amabili angashadile kanye nelilodwa, nama-lifejackets), angethulwa kusukela ogwini lokuhlala. Uma isimo sezulu sivuma, ungawela ichibi elingu-2.4km bese unqamula izindunduma uye ogwini lolwandle. Kukhona nezindawo zokwethula i-tinny yakho yokudoba nokuhamba ngesikebhe.
I-Coorong ihlukile ngezilwane zayo zezinyoni, amagugu oMdabu, umlando wamakoloni othakazelisayo, ukushona kwelanga okumangalisayo, ukubuka okuhle nokukude okuhlobene. I-Absolute Coorong ingenye yezindawo ezimbalwa kakhulu ongayijabulela ngokunethezeka.
Zonke ilineni nezinto ezibalulekile eziyisisekelo zihlinzekwa. amathawula e-BYO
Sicela uqaphele ukuthi indawo ilala abantu abadala abangafika kwabayisi-6 kuphela.
Le ndawo ilungele izilwane ezifuywayo ngo-100%, ngakho-ke wamukelekile ukuletha izinja zakho, amakati nama-axoltyls!
Yonke impahla ibiyelwe ngokuphelele futhi kuhlinzekwa amanzi ezinja/zekati nezitsha zokudla.
Yebo! Izilwane zakho zamukelekile ngaphakathi! Sicela uphathe izingubo zokulala/amashidi. omata njll ukumboza ifenisha uma izilwane zakho zingagxumela phezu kwazo.
Lesi sakhiwo asitholakali ukuthi sibhukhe iSikole.
4.85(33 okushiwo abanye)
4.85 · 33 okushiwo abanye
Ibungazwe ngu-Pet Let
UPet Let Ungumbungazi ovelele
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$175.